दलको आधिकारिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन हुँदैन : पोखरेल - kageshworikhabar.com
दलको आधिकारिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन हुँदैन : पोखरेल
२ फागुन, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले आफ्नो दलको आधिकारिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने धारणा राखेका छन् । निर्वाचन आयोगले आज राजनीतिक दलहरुलाई बोलाएर आचार संहिताबारे छलफल गर्न खोज्दा नेता पोखरेलले यस्तो धारणा राखेका थिए ।
हाम्रो विवादको निरुपण नगरी आयोगले कसरी निर्वाचन गर्न सक्छ ? भन्दै उनले पत्रकारहरुसँग भने–नेकपा आधिकारिकताको विवाद हल नगरी आयोग अगाडि बढ्न सक्दैन । ६४ प्रतिसत मत पाएको राजनीतिक दलको आधिकारिकता टुंगो नलगाई निर्वाचनमा जाने कुरा कत्तिको सम्भव होला ?
उनले प्रश्न गर्दै भने – केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई सदस्यले हस्ताक्षर गरेको दललाई मान्यता दिने की नदिने त्यसमा आयोग प्रष्ट होस् अनि मात्रै अरु विषयमा छलफल गरौंला । आयोगले बोलाएको छलफलमा १४ वटा दल सहभागी छन् । नेकपाको आधिकारिकता विवाद हल गर्न नसक्दा दुबै पक्षले दाबी गर्दै आएकाछन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै आज निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको हो
Previous articleजिल्ला सभापतिको भेला गर्ने निर्णय
Next articleप्रचण्ड – माधवले आज तेस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्दै